Linux ichiri iyo yakachengeteka kwazvo OS? | Linux Vakapindwa muropa
Mushure meLinux Mint, ndanga ndichifunga nezvekuti isu tichiri vakachengeteka pasi rese here.
Mamwe mazuva apfuura kurwisa kwakawanikwa izvo zvakakanganisa vane mukurumbira Linux Mint inoshanda sisitimu. Kurwiswa uku kwaive nekurwiswa kwewebhu yehurongwa hwekushandisa, ichichinja mifananidzo yeIO yeshanduro neCinnamon, ichiwedzera malware senge kumashure kwemasuo kana maTirusi maTrojan.
Nhau idzi dzinoita kuti munhu afungisise kuti boka reGNU / Linux rinoramba riri iro rakachengetedzeka kwazvo Operating Systems boka revose kana mamiriro aya akatoshanduka. Saka Ndiri kuenda kuongorora uye kufunga pamusoro peizvi, kujekesa kana masisitimu eGNU / Linux akachengetedzeka kupfuura mamwe masisitimu kana ave kusagadzikana.
1 Malware paLinux
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kujekesa kuti kune hutachiona muGNU / Linux. Sezvatakamboburitsa, nguva nenguva inoonekwa imwe chirongwa chakaipa , que tora mukana wezvakanaka zvemahara software(Kukwanisa kushandura zvakasununguka kodhi yekodhi), kugadzira software yakaipa. Nekudaro, iyi nhamba yakadzikira kwazvo tichifunga huwandu hwemarware huripo muWindows, saka, kunyangwe paine kurwisa kudiki, Linux ichiri yakachengeteka kupfuura Windows mune izvi.
Kana isu tikataura nezve zvakavanzika, GNU / Linux achiri mambo uye kunyanya izvozvi izvozvi Windows 10 rava iro spy chirongwa chekushandisa neunyanzvi. Mukuwedzera pane kugoverwa senge Miswe izvo zvakagadzirirwa chete kuchengetedza zvakavanzika zvako.
Kunyangwe izvi zvakaitika neLinux Mint, izvi chaizvo anosarudzika Izvo hazviitike kazhinji pasi pano. Panzvimbo iyoyo Windows izere navo, sekushushikana kwekusanzwisisa senge iwo stickykeys uye vamwe vasina kunetseka kugadzirisa.
Microsoft haina kutsigira vashandisi vazhinji vaishandisa Windows XP, kumanikidza vanhu kutenga muchina une simba(Iko kune kusvetuka kukuru mune zvishoma zvinodiwa kubva kuXP kuenda kuW7, kuenda kubva pa64 MB kusvika 1024 MB ye RAM), zvichiita kuti munhu asingakwanise kuzvitenga ave panjodzi yekurwiswa. Iyo hombe nhamba ye yakaderera-zviwanikwa masystem inowanikwa kubva kuGNU / Linux zvinoreva kuti isu tinogara tine rutsigiro, chero komputa yatinayo.
Mhedziso ndeyekuti kurwisa kwacho rimwe zuva kwave kuri nyaya yakasarudzika, ndiko kuti, izvo isu tichiri vakachengeteka pasi rose. Nekudaro, zvinogara zvichikurudzirwa kutarisa zvakaringana uye kuziviswa nezve zvinogona kuitika, kusavimba izvo zvinoita sekufungira uye kugara uchichengetedza system yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux ichiri iyo yakachengeteka kwazvo OS?
Chidzidzo chaifanira kuve chekuti isu tinofanirwa kuziva nezvenhau maererano nenyika yeGNU / Linux, uye mune izvo, mapeji akadai anoita basa rakakura rekuzivisa veSpanish-vatauri.
HACKER ANOTSANANGURA KUSIMBISA KWAAKAITA BACKDOOR MUMazana MAZANA ELINUX MINT DROPS
Iyo yega yekubira, iyo yakatora mazana evashandisi kurodha vhezheni yeLinux ine backdoor yakaiswa yakaratidza kuti zvese zvakaitwa sei.
Isu tinotaura pano kuti saiti yeprojekti yakanga yabiwa uye ichitsauswa vashandisi zuva rese, ichishumirwa kurodha pasi iyo yaive ne "musuwo wekumashure" akaisirwa zvakashata.
Lefebvre akataura pablog kuti Mugovera chete kurodha pasi kwaiitwa uye ivo ndokuzotora saiti isingaenderane nekudzivirira kuwedzera kurodha pasi.
Anobira zvepamutemo, uyo anoenda nezita rekuti "Runyararo," akadaro Zack Whittaker (munyori wenyaya ino), muhurukuro yakavharidzirwa nemusi weSvondo kuti "mazana" emisangano yeLinux Mint aive pasi pake - chikamu chakakosha chevanopfuura zviuru ye kudhanilodha mukati mezuva.
Asi iyo inongova hafu yenyaya yacho.
Paz akataura zvakare kuti akaba kopi yakazara yewebhusaiti yeforamu kaviri - kamwe muna Ndira 28, uye nguva pfupi yadarika musi waFebruary 18, mazuva maviri pamberi pekubiridzira kusimbiswa.
Iyo yekubira yakagovana chikamu cheiyo dhatabhesi yedare, iyo ine ruzivo rwunozivikanwa pachako senge email kero, zuva rekuzvarwa, mapikicha mapikicha, uye mapassword akavharidzirwa.
Aya mapassword haagone kugara nenzira yakadaro kwenguva yakareba. Iyo yekubira yakati mamwe mapassword akatotyorwa, aine akawanda munzira. (Zvinonzwisisika kuti saiti inoshandisa PHPass mapassword kunyora, ayo anogona kutyorwa.)
Lefebvre akasimbisa Svondo kuti foramu yakanga yabatwa chibharo.
Munguva pfupi yakazoitika kuti mubiridzi akaisa dhatabhesi rese pa "dark web" pamusika, runyorwa rwatakakwanisa kuratidza kuti ruripo. Rondedzero yacho yaive ingangoita 0.197 bitcoin panguva yekunyora, kana kutenderedza $ 85 pakukopa.
Paz akasimbisa kuti rondedzero yaive iyo Linux Mint webhusaiti. "Well, I need $ 85," akadaro hacker achiseka.
About 71.000 maakaunzi akaiswa kune iyo kutyora ziviso webhusaiti HaveIBeenPwned akadaro Svondo. Zvishoma zvishoma pasi pehafu yemaakaunzi ese anga atove mudhatabhesi. (Kana iwe uchifunga kuti unogona kukanganiswa nekutyora uku, unogona kutsvaga dhatabhesi rekero rako reemail.)
La Paz aisazopa zita rake, zera kana mukadzi, asi akati aigara muEurope uye haana hukama nemapoka evapambi. Iyo yekubira, inozivikanwa kushanda yega, yakanga yambopa yakavanzika masevhisi masevhisi kune anozivikanwa ekushomeka masevhisi pamasangano akazvimiririra emisika masosi
Mushure mekukurukurirana kwakadzama, mubiridzi akatsanangura kuti kurwiswa uku kwakaitwa muzvikamu zvakawanda.
Paz `` aingotarisisa '' saiti iyi munaNdira paakawana kushushikana achipa mvumo yekuwana mvumo. (Anobira akatiwo aive nemagwaro ekupinda mukati mepepa resaiti reLefebvre, asi aizeza kutsanangura kuti nyaya iyi yakazobatsira sei zvakare.) NeMugovera, mubiridzi anotsiva mufananidzo wekuparadzirwa kweLinux. 64 zvishoma (ISO) ne imwe yakagadziridzwa nekuwedzera backdoor, uye gare gare vakafunga "kutsiva magirazi ese" kune yega yega vhezheni yeLinux pane ino saiti ine vhezheni yakagadziridzwa yavo.
Iyo "backdoored" vhezheni haina kuoma sekufunga kwako. Nekuti iyo kodhi yakavhurwa sosi, iyo yekubavha yakati zvakamutorera maawa mashoma chete kuti arongedze vhezheni yeLinux yaive neseri kwemukati.
iyo yekubira yakazoisa mafaera kusefa refaira muBulgaria, izvo zvakatora nguva yakareba "nekuda kwekunonoka kwechikwata."
Mubiridzi akabva ashandisa kuwana kwake saiti kuti achinje chepamutemo cheki cheki - chakashandiswa kutarisa kuvimbika kwefaira - peji rekurodha pamwe neshanduro yakadzorerwa kumashure checksum.
"Asi ndiani anotarisa f ***** hash?" Akadaro muhakiri.
Yakanga iri inenge awa gare gare apo Lefebvre akatanga kupaza nzvimbo yeprojekti.
Iyo saiti yaive pasi kune mazhinji eSvondo, zvingangodaro zvisipo zviuru zvekurodha pasi. Kugovera kune yakakura inotevera. Kune angangoita mamirioni matanhatu evashandisi veLinux Mint pane ichangoburwa yepamutemo kuverenga, nekutenda muchikamu kune ayo ari nyore kushandisa interface.
Paz akati chikamu chekutanga chekubiridzira chakatanga mukupera kwaNdira, asi chakakwira apo "chakatanga kufambisa mifananidzo yakadzoserwa mangwanani-ngwanani [Mugovera]," akadaro mushambadzi.
Mubiridzi akati pakanga pasina chinangwa chakanangana nekurwiswa uku, asi akati chikuru chaaikurudzira kubackdoor kwaive kuvaka botnet. Iyo yekunyepedzera malware yakatumidzwa zita rekuti Tsunami, iri nyore-kuita-backdoor iyo, kana yaitwa, inobatana chinyararire kune IRC server, uko inomirira maodha.
Yonathan Klijnsma, Senior Threat Research Analyst pamwe neDutch security firm Fox-IT, akati:
Tsunami inowanzo shandiswa kuunza pasi mawebhusaiti uye maseva - kutumira "tsunami" yetraffic kurova yako nzira. "[Tsunami] irobhoti rakareruka, rinogadzirisika rinotaura kune IRC server uye kujoina chiteshi chakatsanangurwa, ine password, kana yakaiswa nemusiki," akadaro Klijnsma. Asi haisi kungoshandiswa chete kutanga web-based kurwiswa, inogona zvakare kubvumira mugadziri wayo "kuita mirairo uye kurodha mafaera kuhutachiona system kuti ishande gare gare, semuenzaniso," akawedzera.
Kwete izvozvo chete, malware inogona kubvisa makomputa akanganisa kudzikisira humbowo hwakasiiwa, akadaro Klijnsma, uyo akabatsira kuongorora nekuongorora zvimwe zvevabiridzi.
Parizvino, chikonzero cheanobira yaive "kuwanikwa kwese chete," asi haana kutonga kushandisa botnet pakuchera dhata kana chero imwe nzira pakombuta yake. Nekudaro, iyo hacker botnet ichiri kukwira uye ichimhanya, asi huwandu hwemachina ane hutachiona "hwaderera zvakanyanya kubva panouya nhau, hongu," La Paz akasimbisa.
Lefebvre haana kudzoka kukero yeemail kuti ataure neSvondo. Iyo saiti yeprojekiti iri mudenga zvakare uye netariro nekuvandudzwa kwekuchengetedza.
Iwo mabhenefiti eakavhurika sosi dzimwe nguva anoshandiswa kune izvi zvinhu zvinosuruvarisa ...
Botnets anoshandiswa pazvinhu zvakawanda, kubvarura masayiti, kumigodhi yekrisptographic mari senge bitcoin ... Zvisinei, ndosaka uchifanirwa kumanikidza padanho rakaderera uye kudzoreredza
Kumanikidza kweGZIP kunogona kutamba kunopesana neTor maseva nevashandisi
Mumwe muongorori akawana ruzivo rwakavanzika mukumisikidza kweGZIP compression yakashandiswa muHTTP iyo yaizobvumidza kuwana ruzivo rwakakodzera pamusoro pemaseva ari muTor network uye nekudaro zvinokanganisa vashandisi vanoshandisa netiweki inozivikanwa nekuvimbisa kuvanzika kwevashandisi.
Juan Carlos Norte, musimudziri weiyoOS desktop desktop, anga achitarisira kuburitsa pamusoro pekuwanikwa uku kunogona kukanganisa maitiro ehukama enetiweki iyi, ichipa zviremera nzira yekuwana ruzivo rwakakodzera. Sekutangira, iye anotaura nezvenguva yakareba sei mawebhusaiti ewebhu akatanga kutsigira kunzwisisa kwezvikumbiro zveHTTP nemhinduro. Mukuita kwekutaurirana kana mushandisi akabata webhu server nekuda kwebrowser yake, anobvunza kana achitsigira kunzwisisa uku uye kuti ndeupi rudzi waanoda kushandisa kubva panguva iyoyo.
Mazuva ano maseva ewebhu anotsigira maviri marudzi ekunzwisisa GZIP uye DEFLATE, achibvumira kuita zvishoma kana zvishoma kukurumidza kuita uye saizi yedata rakatumirwa rakadzikiswa. Ndiyo yekutanga yeiyi inogona kupa matambudziko ekuchengetedza kune maseva pane Tor network.
Misoro yeGZIP yaizove neruzivo rwakakosha
Iyo nyanzvi yakaona kuti maseva anoshandisa iko kunzwisisa uku, pamusoro pekurongedza data, pamwe chete neizvi zvinowedzera musoro une ruzivo rwakanangana nezuva iro chiitiko ichi chakaitwa, uye izvi ndezve nguva yenguva sevha mune iyo yakati kurongedza uye kwayo kwakatevera kudzvanywa kwaitwa. Zvirokwazvo vazhinji venyu munofunga kuti harisi dambudziko rakakomba kudaro, uye zviri pachena hariiti kana tiri kutaura nezveseva yekushambadzira, semuenzaniso, asi ndeye server iyo iri paTor network uye sezvamunoziva iyo inomira Zvekuvanzika.
Kunyangwe kushandisa kweiyi kwaigona kungoziva iyo nguva yenguva ye server, nerubatsiro rweimwe ruzivo iyo protocol inoshandiswa muTor inogona kupa, zvimwe zvakawanda zvinogona kutsanangurwa nezve sevha.
Iyo yekumisikidza kurongedza inodzivirira maseva kubva padambudziko iri
Ichave imwe yenguva shoma iyo yekumisikidza kurongeka inopa chimwe chinhu chakanaka. Pane ino chiitiko, mutsvagiri anowedzera kuti maseva ane default gadziriso mumusoro uno haanyore chero mhando yeruzivo uye anongozadza muminda ine zero. Anowedzera kuti vamwe maneja weTor network vakachinja kumisikidza uye zvishoma kudarika gumi muzana vaizopa ruzivo rwenguva vasingazvizive.
Iyo NSA inoda kuchengetedza zviripo zero-zuva kusagadzikana kwakavanzwa
Zvinotaridza sekunge zvese zvainge zvatove mu limbo apo iyo NSA pachayo zvakare yakapisa mhepo. Kubva kubazi reUS vataura kuti ivo ndivo vanowana zvinopfuura makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe muzana ezuva rekushupika uye kuti havazoburitse chero mhando yeruzivo, vachiedza kuita kuti iwanikwe kwenguva yakareba sezvinobvira.
EFF (Elektroniki Frontier Foundation) yakabatanidzwawo mukukakavadzana uku sebato rakapomera agency kusaburitsa ruzivo rwakakwana nezvezvikanganiso zvekuchengetedza zvakawanikwa mune yakawanda software zvigadzirwa. Zvatora nyaya iyi kumatare ichida kuti ruzivo nezve hurema uhwu rubudiswe kuitira kuti avo vanovagonesa vakwanise kugadzirisa dambudziko nekushambadza zvavandudzwa. Nekudaro, kubva kuNSA ivo havasi kubatana uye vanosimbisa kuti kusvika pavanogona ivo havasi kuzopa rumwe ruzivo kupfuura rwunonyatsodikanwa. Ivo vanowedzera kuti ivo vanonzwisisa kuti chinangwa cheiyo hwaro kushambadza aya matambudziko kuitira kuti apedze icho neimwe nzira asi kusvikira izvo zvinopesana zvataurwa, ivo vanononoka kupa ruzivo nezve iyo zero-zuva kusagadzikana sekureba sezvinobvira.
Kunyangwe uyu Ndira apfuura zvaitaridza kuti mamiriro ezvinhu airatidzika kunge anodhura zvakanyanya kune zvido zveEFF, chokwadi chaive chakasiyana zvikuru uye sangano rakaburitsa gwaro rinotsanangura matanho achateverwa neNSA kushambadza zvimwe zvipembenene, zvisinei, vamwe zvicharamba zvakavanzika kwenguva iripo.
Nepo chinzvimbo chenheyo chiri pachena, icho chesangano chakaramba chakajeka mushure meichi chiitiko chazvino, kuyedza kutora izvo kukundikana kuwana ruzivo kubva kuzvikwata pasina kudiwa kwekuvandudza kunyorera nenzira yemasuo ekumashure.
EFF inotenda kuti zvakakosha kuti uzive mashandisiro anoita NSA
Kubva panheyo vanotenda kuti zvakakosha kusvika pamhedziso inobudirira nechikonzero chekuti basa rakaitwa nechengetedzo zvikanganiso mumabasa espionage rinonzwisiswa uye nderipi riri basa reruzivo maererano nezvinetso izvi zvakaonekwa, iri iro suo rayo muvashandisi makomputa uye mune iwo ari mumakambani.
Muchidimbu, pese pavanowana chimwe chinhu chisina kunaka musoftware kubva kusangano havazoburitse chitsidzo zvisinei nemhando yekusagadzikana, mune ino zero-mazuva ayo anofarira NSA.
Zephyr, iyo Linux Foundation nyowani yekushandisa sisitimu yeInternet yezvinhu
IoT, kana iyo Internet yezvinhu, iri kuwedzera kuvapo zuva nezuva. Zvimwe zvinhu zvinowanda kana midziyo yemumba yakabatana neInternet zuva nezuva kuitira kuti mushandisi atore mukana wegore rekushandisa izvo, kusvikira munguva pfupi yapfuura, zvingafungidzike. Kubva kumaterevhizheni kusvika kumachina ekuwachisa uye kunyangwe machira ekushisa akatove akabatana neInternet, zvisinei, mugadziri wega wega anoshandisa zvirevo zvake, chimwe chinhu chingave chipingaidzo chaicho pakuyedza kugovana ruzivo pakati pemidziyo miviri yakabatana netiweki.
Iyo Linux Foundation inoziva nezve dambudziko iri, saka yanga ichishanda paZefhyr kwechinguva, nyowani -iyo chaiyo-nguva inoshanda sisitimu iyo inotsvaga kugadzirisa dambudziko rekuenderana uye kutaurirana pakati pezvirongwa. Iyi inoshanda sisitimu inotsigirwa nemapuratifomu akasiyana siyana seNXP Semiconductors, Synopsys, uye UbiquiOS Technology uye marezinesi pasi peAparche 2.0 rezinesi.
Zvimwe zveakanyanya maficha eiyi inoshanda system ndeaya:
Scalability, inokwanisa kuchinjisa kune chero chinhu chakabatana.
Zvese zvishandiso zvinobatana zvinoshanda pasi pegore rimwe chete.
Iyo kernel inoshandiswa muZephyr inogona kumhanya pane zvishandiso zvine zvishoma se8 KB yekuyeuka.
Iyo yekushandisa sisitimu yakagadzirira kushanda neyechitatu-bato ma module.
Gwaro rezenisi chete ndiro richashandiswa, rinotumirwa zvakaenzana kune wese munhu. Nenzira iyi, kusawirirana uye kusawirirana kwerezinesi kuchadzivirirwa.
Pamusoro pehunhu hwataurwa pamusoro, iyi sisitimu yekushandira yakagadzirirwa kushanda pasina dambudziko neakanyanya matekinoroji aripo, seBluetooth, Bluetooth Low Energy, IEEE 802.15.4, 6Lowpan, CoAP, IPv4 / IPv6, NFC, Arduino 101, Arduino Ngenxa , Intel Galileo 'Gen 2, uye kunyangwe aine mashoma mabhodhi akaita seNXP FRDM-K64F Rusununguko.
Zephyr inoratidzirwa nekuve inotyisa, inogadziriswa, yakachengeteka uye, pamusoro pezvose, yakavhurika yekushandisa system. Izvi zvinobvumidza vagadziri kuti vazvishandise mune chero mhando yeapurani, nekudaro kugadzirisa kwakanyanya kwazvino kukwana kwehurongwa hwakasiyana (kazhinji hunowanikwa) hweInternet yezvinhu. Iyi inoshanda sisitimu zvakare inotsvaga zvese zvakaderera kudyiwa uye yakakwira yekumhanyisa kumhanyisa, chimwe chinhu chakakosha kwazvo kufunga nezve yakashomeka Hardware yemidziyo.
Zephyr, sisitimu yakagadzirirwa kuchengetedzwa kweIOT
Imwe yematambudziko makuru eInternet yezvinhu kuchengetedzeka. Hackers vari kuwedzera kuedza kutora kutonga kweizvi zvigadzirwa zvemazuva ano, zvichikonzera njodzi mukushanda kwavo kwakakodzera. Iyo Linux Foundation inoda kugumisa izvi zvese, uye nekuda kweichi chikonzero yakagadzira yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu, iyo inogona kutariswa yakachengetedzeka kupfuura mamwe masisitimu epamutemo ichitendera chero mushandisi anofarira kuongorora kodhi yemabhugi, kushomeka uye kunyangwe debug kodhi yekuvandudza mashandiro ayo.
Sezvatakambotaura, iyo Internet yezvinhu iri kuramba ichivapo pakati pedu, zvisinei, dambudziko rekushandisa zvivakwa zvehunyanzvi uye tekinoroji zvinodzivirira iyo IoT kuramba ichikura uye ichishanduka necosystem imwechete. Zephyr pasina mubvunzo ichave nhanho diki kune ino yakasarudzika ecosystem.
Linux ichiri ZVAKAWANDA zvakachengeteka Zvakadii uye kusvika papi?
Kubva pamaonero angu GNU / Linux yakamira kuve OS yakachengeteka kwenguva pfupi. Nekuti iri rakavhurika sosi, zviri nyore kuwana kusagadzikana uye kutora mukana wavo. MuWindows iwe unofanirwa kushandisa reverse engineering iyo inowanzo kukanda iwe kodhi yemutauro kodhi isiri iyo nguva dzose yakazara chaizvo, nepo uri muGNU / Linux iwe unokwanisa kuwana iyo sosi kodhi pasina matambudziko. Manyepo ekuti maziso ane chiuru anotarisa kodhi yekodhi ingori iyo, ingori ngano. Chokwadi ndechekuti kune vashoma kwazvo vanhu vakarovedzwa uye vane ruzivo rwekuita izvi uye ruzhinji rwavo rwakanyanya kubatikana nezvenyaya dzavo kuita kupfuura zvese. Kana iwe usinganditendi, nditsanangurire kuti sei Compiz ari kutofa kare. Nei pasina Compiz muDebian 8 uye zvigadzirwa? Zvakareruka, hapana vanhu vari kushanda pazviri.
MuDeepWeb mune zvakawanda zvidzidzo zvekuti ungabira sei Debian, CentOS, RedHat server mune isingasviki 5min. Kune zvekare dzidziso dzekuti ungashandise sei kusagadzikana muPHP, MySQL. Zvakare pamwe nedzidziso dzinoverengeka dzekushandisa kushomeka mune flash uye muFireFox uye Chromium mabhurawuza. Pamusoro pehunyanzvi hwekubira distros senge Kali Linux kana Parrot OS. Uye mazhinji Tutorials ekuti ungashandise sei kusagadzikana uye kuwedzera mikana.
Tisingatauri dzakasiyana-siyana zvekudzidzisa pakubiridzira uye zvemagariro mainjiniya kutapurira GNU / Linux, kunyanya Ubuntu, PPAs uye .DEB kana .RPM mafaera ane njodzi zvakanyanya. Ini ndinokurudzira kusashandisa chero PPA isiri kubva kune anovandudza webhusaiti yepamutemo, kana iwe ukaona iyo PPA mune blog, zvirinani kusaiisa zvachose. Zviri nyore kutapurira GNU / Linux kuburikidza nehukama hwehukama. Iwe unongogadzira iyo PPA yemusoro wenyaya kana yakanaka kana inokatyamadza mifananidzo, kana iwe unoita iyo PPA pane vhezheni yechangobva kuitika uye yakagadziridzwa chirongwa kupfuura iyo inowanikwa mune yepamutemo reposheni, iwe unoisa izvo mune blog uye iwe unotova ne yakawanda yemapcs zombies.
ClamAV yakaipa pakuona hutachiona, Trojans, uye malware, saka hapana chikonzero chekushushikana nezveiyo antivirus antivirus. Asi chimbo chakanakisa ndechekuti linuxer inofunga kuti inodzivirira hutachiona uye malware.
Uku kutaura kunoponesa chinyorwa chose.
Kashoma kuona kuona kwechokwadi, kutendeseka uye kufunga munzvimbo ine linux kwakazara kune zvese zvekunyepedzera uye vanopfurikidza mwero.
Ini ndinobvuma kuti Linux ndiyo yakachengeteka OS iripo, nekuti pakati penyaya dzandakagamuchira kwenguva yakati rebei, ini handina kuona akakosha ekuvandudzwa kwekuchengetedza. Asi ndingadai ndaikuda iwe kwete chete kuti utaure nezveLinux vs Windows mune ino chinyorwa. Zvingave zvakanaka kana iwe ukataura pamusoro peMacOSX uye ngano yayo yekuve yakachengeteka zvakanyanya kune iyo OS uye zvinoratidzwa kuti haisi. Mwedzi wapera iyo yakagadzirisa zvinopfuura 140 kutadza kupa zita rimwe chete. Iyo av-bvunzo saiti ine chinyorwa chakakumikidzwa kwairi uye pakati payo antivirus bvunzo iyo zvakare inosanganisira MacOSX. Shuwiro yakanakisa.